Global Voices teny Malagasy » Iraniana-Amerikana Mpamorona Lamaody any New York, Mampiasa ny Lamaody Hiteraka Fiantraikany Ara-tsosialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Iraniana-Amerikana Mpamorona Lamaody any New York, Mampiasa ny Lamaody Hiteraka Fiantraikany Ara-tsosialy
Voadika ny 02 Janoary 2017 1:28 GMT 1	 · Mpanoratra Omid Memarian Nandika Tantely
Sokajy: Mediam-bahoaka, Ny Tetezana - The Bridge
Mpilatro mampiseho ny iray amin'ireo lamba nosainina avy amin'ny saritanin'ireo tanàna ho an'ny Cityzn by Azin. Sary nozarain'i Azi Valy ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Avy amin'ny fipoiran'ireo ady sy fifandirana rehetra miseho eto an-tany, namorona marika nalaina avy tamin'ireo tanàna maro ny vehivavy iray mpamorona ao New York City, izay mikatsaka ny hampibaribary ireo teboka iombonana no sady manaja ihany ireo fahasamihafàna ihany koa, ary mamorona “fampahafantarana ireo toerana sy fampiroboroboana ny lamaody ihany koa ho fitaovana fampitàna hafatra mba hiteraka fiantraikany ara-tsosialy.”
Ny taona 2012, namorona ny Cityzen by Azin , lamaody lafo vidy ary marika-nà kojakoja maro ilay Iraniana-Amerikana mpanao maritrano lasa mpamorona lamaody i Azin Valy, mpiara-namorona ilay orinasa I-Beam Design mpanao maritrano sy manao zavatra hafa any New York, izay nahazo loka.
Mpilatro manao ny iray amin'ireo lamba fisalotr'i Azin. Natao hampifandray “ny fo sy ny fanahin'ny tanàna amin'ny akanjo iray” ilay endrika noforonina. Sary nozarain'i Azin ary nahazoana alalana ny fampiasana azy.
“Fomba iray io nampifandraisana ny fo sy fanahin'ny tanàna iray amin'ny akanjo iray. Ny akanjo no rafitra voalohany afaka onenantsika. . . . Resaka hoe mijery amim-pahasahiana ary sahisahy io. Resaka zo maha-mpinon'ny tany tontolo io fa tsy hoe fitiavana ny tanindrazany fotsiny na ny faritaniny,” hoy i Azin Valy tamiko tao aminà tafatafa tao amin'ny biraony tany Soho. “Ahafahanao ara-bakiteny miakanjo ny reharehanao eny an-tànana mihitsy io, na hoe mampifandray anao tsotra izao amin'ny vondrom-piarahamonina erantany.”
Omid Memarian: Ahoana ny làlanao avy tamin'ny maha-mpanao maritrano nahita fahombiazana anao ho amin'ny tontolon'ny lamaody?
Azin Valy: Ny taona 2011, voatendry hnadray anjara tamin'ny fampisehoana drafitra fanorenana an-tanandehibe tao amin'ny Mozean'ny Kanto Maoderina (MOMA), nandinihana ny hoavin'ireo tanàna izay nandalo fotoan-tsarotra tamin'ny fisintonana ny zo fizakana ny tany, ny orinasa mpanao maritrano, I-Beam Design, natsanganay sy Suzan Wines. Satria aho nikaroka ny firafitry ny tanan-dehibe tamin'ireo tanàna ireo—tany New York, New Jersey, Florida, Kalifornia ary Nevada—talanjona tamin'ny fitazanana azy ireo avy eny ambony aho, na eo aza ireo kirizy izay atrehany eny amin'ny tany. Nanontany tena aho raha toa misy làlana hahafahana mampiseho ny hatsaran'izy ireo no sady hanairana ny saina momba ireo fanamby atrehany, amin'ny fanatsofohana azy ireny anatin'ny lamaodin'ny lamba. Tamin'izany no nahitako hevitra ny hanapoirana lamaody sy taotrano (mifanatrika amin'ny drafi-panorenana an-tanàndehibe) hiaraka amin'ny fandraharahàna ara-tsosialy. Ary dia teraka ny Cityzen by Azin, mba hampahafantatra ireo toerana, ary hampiakatra ny lamaody ho fitaovana fampitàna hafatra hiteraka fiatraikany ara-tsosialy.
Ny tena nampientanentana ahy dia ilay eritreritra hamelàna ny tontolo hamaritra ny endrika tsrairain'ny tanàna. Ohatra, ny Reniranon'i Tiber no lasa tendan'akanjon'i Rome, na ny Renirano Chao Phraya no lasa tadin'akanjo amin'ny akanjo Bangkok, ary ny “Ganges” lasa dakany amin'ny akanjo Dhaka.
Nahafahako nanao fanehoana lamaody maro ny fanaingitaingenana ireo tanàna maro eo amin'ny endriky ny vatana, ary ny filalaovana ny habeny tsirairay avy, izay tena nanokatra tamiko ny tany tontolo, ara-bakiteny. Mahatsapa aho fa afaka mandany ny androm-piainako hamorona endrika lamaody maro tsy misy fiafaràny, sady mianatra momba ny toerana tsirairay avy, ary mitsidika an'eritreritra an'izao tontolo izao. Fomba iray koa io nahafahako nifandray tamin'ireo toerana tiako sy ireo toerana nahaliana ahy.
Sary iray an'ilay Iraniana-Amerikana mpamorona lamaody, Azin Valy. Sry nozarain'i Azin ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
OM: Oviana ianao no nieritreritra ny hevitrao havadika ho marika lamaody?
AV: Rehefa tsapako ny fahafahana lehibe ananan'io endrika vaovao io, amin'ny lafiny ara-bika sy famoronana ary ihany koa amin'ny fiantraikany ara-tsosialy mety haterany. Rehefa dinihana, ny Tany manontolo no karakaraiko!
Amin'ny maha Iraniana-Amerikana ahy, kolontsaina roa samihafa no tànako, izay raha ny marina dia manana zavatra betsaka iraisany, kanefa feno hevi-diso mikasika ny ankilany sy ny andaniny. Nieritreritra aho hoe mety ho zavatra tsara sy lehibe ho ahy ny famoronana marika iray izay mihoatra lavitra ireo fefy ara-batana sy ara-tsaina, ary mampiroborobo ny fifampiresahana maneran-tany mankany amin'ny fifankahazoana sy fandriampahalemana.
OM: Ahoana no hisafidianana hoe tanàna iza no hatao?
AV: Miovaova arakarak'ireo toerana nalehako na tiako haleha ilay izy, na ny niavian'ireo mpiaramiasa amiko, na miankina amin'ireo zava-mitranga eto an-tany koa na ireo toerana misy fifandirana na misy kirizy. Mikaroka ny tanàna tsirairay avy aho ary mianatra mikasika ny tantarany, kolontsainy, endriny, asatànany, sns. ary misafidy ireo loko mifanaraka amin'izay. Arahana tapakila kely miraikitra aminy ny singa tsirairay an'ny Cityzen, na torolalana kely izay mankalaza ilay tanàna nasongadina, amin'ny alalan'ireo fahatsapàna enina, ny fahitàna, fihainoana, fitsapàna, tsiro, ny fofona ary ny fisainana, izay ampahafantaranay ny boky hovakianana na mozika ho henoina na sakafo handramana.
Olona tia mikatsaka ny lafatra ihany koa aho ary tia misafidy ireo tanàna misy fifandirana, ary mampiseho fa lehibe mihoatra noho ireo fahasamihafana kely mampiady antsika ny tany, ary mila miray hina isika mba hiaro azy io fa tsy hoe hamotika azy indray. Amin'ny fanaizrana ny saina ho amin'ireo toerana misy fifandirana sy kirizy, antenaiko ny hisintona ny fijery amin'ny ho avin'ireo mponina ao ary hampiasa ny mariko mba hampisy fiantraikany ara-tsosialy bebe kokoa.
Miara-miasa akaiky amin'ireo fikambanana mpanao asa soa maro ihany koa aho mba hanampy amin'ny fanangonana vola sy fampahafantarana ireo adiny arakaraky ny toerany ara-jeografika.
Mpilatro manao ny iray amin'ireo lamba fisalotr'i Azin. Mikaroka ny hanana vehivavy masoivoho manerana ny tany tontolo ilay marika, mba hisolo tena ireo tanàna maro samihafa, ao anatin'ny ezaka hisian'ny fifampiresahana manerantny. Sary nozarain'i Azin ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
OM: Toy ny ahoana ny hamafin'ny fidirana tao amin'ny tsenan'ny lamaody tena feno fifaninanana be?
AV: Ny maha-olona kely vintana ahy ao amin'ny tontolon'ny lamaody no tena fanamby—izay mety hanome fahafahana tsara ihany koa anefa. Maro ny zavatra nianarako tao anatin'ny fotoana fohy ary mbola betsaka ihany koa ny tokony hianarana. Mampientanentana ahy ny lafiny rehetra amin'izy io.
Ny tena mampientanentana mikasika ny asanà mpamorona lamaody mifandray amin'ny maritrano dia ny vokatra azo eo noho eo ary ny fampisehoana azo avy aminy. Afaka manao zavatra lehibe ny indostrian'ny lamaody mba hanangonana ireo vehivavy izay 80%-ny mpanjifa mba hilaza mazava ny fomba fijeriny, tsy amin'ny fanjifàny fotsiny ihany fa amin'ny fahaizany ihany koa.
OM: Ahoana ny haminavinainao ny hoavin'ny marika-nao? Inona no dingana manaraka?
AV: Ho an'ny ato ho ato, miasa aminà karazana akanjo mafana izahay, miaraka aminà Afghana/Soisa/Amerikana mpamorona endrika mahay sady malaza no sady mpahay maritrano ihany koa. Zolaykha Shehrzad no anarany, avy ao amin'ny Zarif Design izy ary manohana vehivavy mihoatra ny 30 any Kaboul. Mamokatra ny tahiry Kabul ho an'ny taona ho avy izahay, izay tena mampientanentana ahy tokoa. Manantena ny hanao fampisehoana izahay ato ho ato mba hanehoana ireo marika roa ireo ary hanampy amin'ny fanangonana vola ho an'ireo ezaka fandriampahalemana.
Ho an'ny lavitra ezaka indray, antenaiko ny hanana vehivavy “ambasadaoro” avy amin'ny tany tontolo ho tonga hivondrona mba hanohana ireo tanàna maro samihafa ary hampiroborob ny fifampiresahana mivelatra kokoa mankany amin'ny fandriampahalemana, satria izy ireo no mpampihavana sy maro an'isa amin'ireo mpanolotra fanampiana eto an-tany. Miasa aminà maodelim-pandraharahàna ihany koa aho, izay ahafahako miaraka miasa amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy tsy miankina amin'ny fanjakana mba hampiasa ireo olona nafindra monina, indrindra ireo vehivavy, amin'ny sarany ara-drariny eny an-tsena, sady mamorona toerana fanamboarana azo afindrafindra any anatin'ireo tobin'ny mpifindra monina.
Raha lazaina ara-bakiteny sy an'ohatra, manana izao tontolo miaraka amiko aho mba hiarahana miasa, ary mahavita mitety manontolo ny faribolana mampifandray ireo zava-mahaliana ahy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/02/93939/
 Image: https://mg.globalvoices.orgA mode